Peas na sweetara n'ọkụ ụtọ nduku na anụ ezi | Ntụziaka nri
Maria onyekwere | 05/06/2021 10:00 | Akwụkwọ nri
N'ụlọ, anyị na-eri peas ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ọ bụla. Anyị na-akwadebe ha mgbe niile n'ụzọ yiri nke ahụ na obere ọdịiche. Ihe mere ị ga-eji gbanwee ọkwa ochie peas na ham Ọ na-enyere anyị aka ka ike ghara ịgwụ anyị na tebụl. Ee ee, ọ na-enye aka na ịmepụta nsụgharị dị mfe dịka nke a peas na asara n’ọkụ ụtọ nduku na anụ ezi.
Asara n'ọkụ ụtọ nduku ọ bụ ihe nkwado zuru oke na agwa. Ọ na-enye efere a ihe ụtọ dị ụtọ nke na-adọrọ mmasị m mgbe niile na nke dị iche na nnu nnu nke anụ ezi. Anyị atụkwasịla yabasị, n'ihi na yabasị na-agbakwunye.
Want chọrọ ịmegharị efere a? Ime nke a ga-adịrị gị mfe. Ngwunye ihe dị obere na ọkpụrụkpụ nke Ntụziaka na-akwadebe na ọkara otu awa. Mgbe nduku na-atọ ụtọ na-esi nri na oven, ị ga-enwe oge iji dozie ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ. Lelee ya!
Nri oge: 30 m
1 yabasị, julienned
1 iko peas
Mpekere 2 nke anụ ezi
Maka ụtọ nduku
1 ọkara ụtọ nduku
50 ml. mmanụ oliv na-enweghị atụ
⅓ teaspoon nke nnu
⅓ teaspoon nke paprika
Anyị na-eme ka oven sie ike na 220ºC.
Ozugbo mere, anyị na-agwakọta mmanụ na iko, nnu na paprika ihichapu nduku uto.
Mgbe ahụ, anyị na-bekee ụtọ nduku na bee n'ime 2 cm Mpekere. ọkpụrụkpụ na anyị na-etinye na mmiri tree, na jiri akpụkpọ anụ.
Ghichaa ngwakọta nke anyị kwadebere mpekere nduku na anyị na-akpọọ nkụ maka nkeji iri anọ ma ọ bụ ruo mgbe obi na n'ọnụ bụ ubé ọlaedo.
Ọ bụ ezie na mpekere nduku na-atọ ụtọ, na skillet kpocha yabasị 15 nkeji na tablespoons abụọ nke mmanụ.
N'otu oge, na mmiri ite na mmiri na nnu ka esi nri agwa maka 8 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe ha nwere ụdị ịchọrọ.
Mgbe ah anyị na-etinye anụ ezi e kere eke ma ọ bụ ị ga-atụba pan na yabasị ma gbanye ya maka nkeji ole na ole. Iji mechaa, gbakwunye peas esi ma kpochaa ya ma gbanye ọkụ.
N'oge a anyị ga-enwe ngwa ọrụ niile dị njikere arịọnụ efere. Debe mpekere nduku uto na ala na n'elu ha yabasị, anụ ezi na peas.
N'ikpeazụ na tupu ị na-eje ozi na peas na poteto a sweetara n'ọkụ na anụ ezi, anyị na-agbakwunye ose ala
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Efere » Akwụkwọ nri » Peas na roara n'ọkụ ụtọ nduku na anụ ezi
Osisi Nduku Chorizo